Moon Sun Energy ရဲ. ၂၀၁၇ ပြက္ခဒိန်ပေါ်က အလန်းစား မြန်မာမော်ဒယ်မလေးများ | Buzzy
ယနေ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ
Moon Sun Energy ရဲ. ၂၀၁၇ ပြက္ခဒိန် ထွက်ပေါ်လာပြီး ဒီပြက္ခဒိန်မှာတော့ မော်ဒယ်များအဖြစ် သင်ဇာဝင့်ကျော် ၊ အိချောပို ၊ အွန်ဆိုင်း ၊ ဝါဆိုမိုးဦး ၊ ယွန်းမီမီကျော် တို့ပါဝင်ပြီး ဓါတ်ပုံများကိုတော့ Aye Zaw Moe က ရိုက်ကူးပေးထားတာပါ
Moon Sun Energy ရဲ. ၂၀၁၇ ပွက်ခဒိနျ ထှကျပျေါလာပွီး ဒီပွက်ခဒိနျမှာတော့ မျောဒယျမြားအဖွဈ သငျဇာဝငျ့ကြျော ၊ အိခြောပို ၊ အှနျဆိုငျး ၊ ဝါဆိုမိုးဦး ၊ ယှနျးမီမီကြျော တို့ပါဝငျပွီး ဓါတျပုံမြားကိုတော့ Aye Zaw Moe က ရိုကျကူးပေးထားတာပါ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ မြန်မာဝတ်စုံရိုးရိုးလေးနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
အပေါ်ယံတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ယောက်ျားတွေ တကယ်သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အပြုအမူမျိုးဆိုတာ